Agaasimaha Teknolojiyada Warfaafinta
Tony Lusiba wuxuu ku biiray McKnight bishii Janaayo 2021 isagoo ah agaasimaha teknolojiyadda macluumaadka (IT). Wuxuu horumariyaa oo fuliyaa istiraatiijiyadda IT-ga ee McKnight si uu u taageero howlaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee aasaasiga ah isla markaana u aqoonsado una hagaajiyo xalalka tikniyoolajiyadda ee isku xiraya kooxdeena gudaha iyo la-hawlgalayaasha dibadda.
Lusiba waxay xirfad ku leedahay howlaha teknolojiyadda, adeegyada ganacsiga, iyo xalalka la habeeyay waxayna ku takhasustay amniga xogta si loo ilaaliyo macluumaadka muhiimka ah loona ilaaliyo hantida aqooneed. Wuxuu ku fiicnaaday helitaanka habab hal abuur leh oo ah soo saarista qiime iyo isbeddelka dhijitaalka.
Xirfadda IT-ga oo soo jirtay in ka badan 20 sano, Lusiba waxay hoggaamisay waaxda IT-da ee J&J Distributing, oo ka mid ah shaqaaleeyeyaasha gaarka loo leeyahay ee ugu weyn ee St. Kahor inta uusan ku biirin McKnight, wuxuu u shaqeeyay lataliye IT-ga madaxbanaan oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah sida Guryaha Guryaha iyo Suuqgeynta Evo3.
Lusiba waa xubin ka tirsan Guddiga Hogaaminta ee Full Stack Saint Paul Steering, oo ka kooban khubaro ka socota teknolojiyadda, hal-abuurnimada, horumarinta dhaqaalaha, dhismaha, iyo qaybaha horumarinta shaqaalaha. Wuxuu ku fadhiyaa guddiga maamulka ee Gustro Ltd, wuxuu u shaqeeyaa Guddiga Hal-abuurka Shaqaalaha ee Degmada Ramsey isagoo ah guddoomiyaha guddiga tiknoolajiyada, wuxuuna ahaa danjire rugta ganacsiga ee Saint Paul Area.
Lusiba waxay jaamacadda St. Thomas ku haysataa shahaadada mastarka ee nidaamyada softiweerka iyo shahaadada koowaad ee bachelor-ka ee Daraasaadka Caalamiga ah iyo maareynta Jaamacadda Hamline. Intaa waxaa sii dheer, wuxuu haystaa shahaadada amniga internetka iyo Sharciga Asturnaanta ee Dugsiga Sharciga ee Mitchell Hamline.
Lusiba waxay ku dhalatay kuna barbaartay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Shaqada ka baxsan, waa xubin firfircoon oo ka tirsan bulshada reer Minnesota ee isugusoo baxday wuxuuna u tartamay heerar caalami ah. Jacaylka uu u qabo ciyaarta iyo booskiisa inuu yahay shirkad qaybiyaha caalamiga ah ee Harrow, wuxuu door muhiim ah ka qaatay sugidda kafaalaqaadka Kits-ka Qaranka Kenya iyo Ugandha ee Konsalka Cayaaraha Glasgow 2014. Dhawaan wuxuu qaatay wadista baaskiil wadista wuxuuna taageero weyn uyahay Minnesota Vikings iyo Liverpool FC.